, Nesangqawe ngegolide engathi ngumfanekiswana
, nesangqawe steel
bemiliza steel wire
izacholo link Chain
Watch Band ubucwebe
iiseti ngegolide engathi ngumfanekiswana
iiseti umbala Steel
Stainless Sets izacholo
Stones semi-elixabisekileyo Jewelry ulwazi ngeeSethi
Namacici ne Chains
namacici ngumfanekiswana ubudala
Semi-namatye anqabileyo namacici
amakhonkco ngegolide engathi ngumfanekiswana
amakhonkco umbala steel
Thina steel stainless izacholo umenzi kunye yivenkile, ngoko moq yethu USD 300, iiPC 3 uyilo ngalinye ubungakanani ngalinye.
Kodwa ukuba ngenene kufuneka isampuli ukuvavanya, ungakwazi umyalelo USD 100 ubuncinane, iindleko lokuthumela malunga USD 30 1 kg.
Ndinqwenela ukuba singakwazi ukwakha ishishini engcono kunye nobuhlobo.
kppp umntu ngesandla ukuba aphendule imibuzo yakho. Sikholelwa ukufaneleka nesevisi yabaxumi, kwaye uya kwenza konke okusemandleni ukuze anelise abaxumi bethu. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, izimvo, okanye iingcebiso, nceda uqhagamshelane nathi.
Ubulungu Level: (accoring imali i oda yakho, uya kunandipha disccount kwinqanaba ezahlukeneyo)
Ke siye safumana imiyalelo ngakumbi nangakumbi yonke imihla, siye uhlengahlengiso inkqubo yethu yokusebenza ukwenzela ukubonelela ngenkonzo engcono kubathengi bethu uqinisekise abaxumi bethu ukufumana imiyalelo kwexesha.
Ulandela amanyathelo zethu ezintsha zomsebenzi:
(Ngokutsho Bejing Time)
1. Ntsasa nganye, kuba zonke odolo elitsha bahlawulwa esele phambi 12:00 emini, siya eyicwangcisa kwaye khangela isitokhwe kuloo mini.
Ukuba wenza intlawulo emva 12:00 emini, siya eyicwangcisa kwaye khangela istokhwe ngosuku olulandelayo.
2. Emva kokuba ufumene uluhlu ukupakisha, ukuba unako ukwenza intlawulo yokugqibela phambi 6:00 emva kwemini, siya nga vaka umyalelo kwi ngokuhlwa afanayo.
Ukuba wenza intlawulo emva 6:00 emva kwemini, siya vaka phandle indlela ngosuku olulandelayo.
3.For-odolo leyo bahlawulwa kakade, ukuba uye ukudibanisa ukuze lokuzalisa imali eseleyo phambi 12:00 emini, siza kukuthumela kuluhlu ivale yokugqibela ngokuhlwa elifanayo vaka phandle indlela ngosuku olulandelayo.
Ukuba wenze i-odolo nokongeza lokuzalisa imali eseleyo emva 12:00 emini, siya hlengisa indlela wodibaniso kunye uthumele uluhlu ivale lokugqibela ngosuku olulandelayo kwakho kwaye uya oda kuba izohamba emva ngomso.
Phambi kokuba wenze umyalelo, nceda ngobubele amalungiselelo ixesha ngokwendlela imeko yakho.
Uxolo nayiphi lula eyabangela kuwe.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
akhawunti PayPal: julong@julongsteeljewelry.com
Nceda uqhagamshelane nathi phambi kokuba wenze intlawulo nge union wasentshona, ukukhangela igama ngumamkeli likaThixo.
Bank Transfer Ulwazi
Beneficiary Bank Igama: HSBC
Igama lenkampani: Jinyun Trade Limited
Akhawunti Bank no. : 801406885838
Beneficiary Bank: 1 Queen i-Road Central, Hong Kong
USWIFT Code: HSBCHKHHHKH
We ithunyelwe kuyo nayiphi na idilesi ehlabathini.
Izinto odolwa kuthi ezithunyelwa yi EMS okanye TNT okanye DHL okanye kaFedEx okanye UPS.
Siza kukwazisa kunye lokulandelela No. nge e-mail msinyane nje umyalelo wakho yathunyelwa xa ulufumana evela kwinkampani okucacileyo.
Kufuneka idilesi yesitalato lonikezelo.
Impahla ziya kusiwa emnyango Air-express eqhelekileyo ngendlu, nto leyo ethatha iintsuku zokusebenza malunga 3-5.
ixesha Delivery musa ziquka ixesha processing.
iimveliso zethu ezithunyelwa ngaphandle yonke imihla, ukususela ngoMvulo ukuya kutsho ngoMgqibelo, ngaphandle iiholide. odolo ezininzi ezibekwe evekini ziya zathuthwa iintsuku ezi-2 okanye ezi-3, ngoxa odolo kwi veki iya ngenqanawa ngoMvulo olandelayo. Uya kufumana isiqinisekiso ye-imeyile kunye nenombolo yakho yokulandela. iiyure ezingamashumi amabini anesine emva kokuba ufumane inombolo yakho yokulandela, uya kuba nako ukulandela umyalelo wakho aku
ixesha Delivery kwahluka ngokuxhomekeke ilizwe oya kuyo.
jinyun izacholo eyakhile intsebenziswano eqinileyo nazo zonke ezinkulu iinkampani yokuthumela ezine: DHL, UPS, kaFedEx kunye TNT ukubonelela ehlabathini lonke emnyango-to-ucango delivery yobungcali.
Izinto ziya ezithunyelwa ngaphandle ngemihla zoshishino ilandelayo emva kokuba bahlolwe kuzo. Ngokubanzi, oku kungathatha iintsuku zoshishino malunga 3-5 yokuhanjiswa, kuxhomekeke kunikezelo ezahlukileyo kuthetha ukuba ukhetha. Asinaxanduva ukuba idilesi engalunganga okanye undeliverable. Nceda uqinisekise idilesi yakho yokuthumela ichanekile kwaye ehanjiswayo.
Sivumela ukuba ukulandelela oda yakho konqakrazo lwe mouse. Xa ukuhambisa kwakho kuqinisekisiwe, uza kufumana inani umkhondo nokuqinisekisa yakho ye-imeyile.
Ingaba iza kuthatha ixesha elingakanani ukuze into yam ukufikelela kum?
Nceda uqaphele ukuba imihla zoshishino, ngaphandle ngoMgqibelo, ngeCawa and Public Holidays, ibalwa ngokwalo thuba lokusiwa. Ngokwesiqhelo, kuthatha iintsuku zoshishino malunga 3-5 lonikezelo.
njani I ukulandelela zimpahla yam?
Thina athumela ukuthenga kwakho phambi kokuphela ngosuku olulandelayo emva kokuba bahlolwe-out. Siya kuthumela i-imeyile kunye nenombolo yokulandelela ukuze ukwazi ukukhangela inkqubela yonikezelo yakho yenethiwekhi website.
Ndimele ndenze ntoni xa ukuhambisa yam ifika?
Nceda uvumele ukuya kwiintsuku zomsebenzi 10 yento yakho ukuze kusinda. Ukuba nangoku ingafiki, nceda zifike kuthi ngokunqakraza kwi website iqhosha "Contact Us". Siya kubuyela kuwe kamsinya.